राष्ट्रपतिका लागि भीख माग्दा कति उठ्यो ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
राष्ट्रपतिका लागि भीख माग्दा कति उठ्यो ?
२०७५-०८-१६ बिचार / प्रतिक्रिया
राष्ट्रपतिका लागि नमूना गाडी तयार
काठमाण्डौं, मंसिर १६ ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका लागि १८ करोडको गाडी खरिद गर्न लागिएको विरोधमा केही दिन अगाडि एक हुल युवाहरु पशुपतिमा एक रुपैयाँ भिख माग्दै हिँडेका थिए । उनीहरुले अहिलेसम्म कति पैसा उठाए र त्यो पैसा के भयो होला भनि सोधखोज गर्दा पत्ता लाग्यो, राष्ट्रपतिका लागि नमूना गाडी तयार भइसकेको रहेछ ।
चन्दा उठाएर नमूना गाडी बनाउने व्यक्ति र समूहको नाम तत्काललाई गोप्य राखिएको छ । तर, यसमा तिनै युवा संलग्न छन्, जो केही दिन अगाडि राष्ट्रपतिका लागि भनेर पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा भिख मागिरहेका थिए ।
भिख माग्ने समूहका एक सदस्यका अनुसार उनीहरुले एक–एक रुपैयाँ मागेर २३ सय रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । त्यही रकमबाट नमूना गाडी बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीलाई पठाउन लागिएको उनले बताए ।
‘राष्ट्रपतिलाई दिनका लागि हामीले स्वदेशी डमी गाडी बनाइसकेका छौं । त्यो छिट्टै सार्वजनिक पनि गर्छौं,’ उनले भने । राष्ट्रपतिलाई दिने डमी गाडी पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरुको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो ।
यो समूहमा करिब १८ जना सक्रिय छन् । सबै जनाको केही न केही पेशा व्यवसाय छ । उनीहरु आफैले रकम संकलन गरेर बिभिन्न गतिविधि गर्दै आएका छन् । यही समूहले बिहीबार बिहानै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सार्वजनिक स्थानहरुमा निर्मला पन्तको तस्वीर अंकित पोस्टर टाँसेको छ । पोस्टरमा लेखिएको छ( सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन ।